Kudya kwaShe Kwemanheru—Chiitiko Chinokudza Mwari | Bhaibheri Rinodzidzisei?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Aymara Bambara Baoule Basque Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabyle Kalenjin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mingrelian Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
VAKRISTU vanorayirwa kuchengeta Chirangaridzo chorufu rwaKristu. Chiitiko ichi chinonziwo “kudya kwaShe kwemanheru.” (1 VaKorinde 11:20) Chii chinomboita kuti chiitiko ichocho chive chinokosha zvikuru? Chinofanira kuchengetwa rini uye sei?
Jesu Kristu akatanga chiitiko ichi usiku hwePaseka yechiJudha muna 33 C.E. Paseka yaiva mutambo waiitwa kamwe chete pagore, pazuva rechi14 romwedzi wechiJudha waNisani. Kuti vawane musi iwoyo, zviri pachena kuti vaJudha vaimirira zuva muchirimo rinenge riine maawa anenge 12 echiedza uye 12 erima. Kugara kwomwedzi kunooneka kwokutanga kunenge kuri pedyo nezuva iri kwairatidza kutanga kwaNisani. Paseka yaisvika mazuva 14 gare gare, pashure pokunyura kwezuva.
Jesu akachengeta Paseka pamwe chete nevaapostora vake, akadzinga Judhasi Iskariyoti, akabva atanga Kudya kwaShe Kwemanheru. Kudya uku kwakatsiva Paseka yechiJudha, saka kunofanira kuitwa kamwe chete pagore.
Evhangeri yaMateu inoshuma kuti: “Jesu akatora chingwa uye, akumbira chikomborero, akachimedura uye, achichipa vadzidzi, akati: ‘Torai, mudye. Ichi chinomirira muviri wangu.’ Uyewo, akatora kapu uye aonga, akaipa kwavari, achiti: ‘Inwai, imi mose; nokuti iyi inomirira “ropa rangu resungano,” richadururirwa vazhinji nokuda kwokukanganwirwa zvivi.’”—Mateu 26:26-28.
Vamwe vanodavira kuti Jesu akachinja chingwa chacho kuva nyama yake chaiyo uye waini yacho kuva ropa rake. Zvisinei, muviri wenyama waJesu wakanga uchakakwana paakavapa chingwa ichi. Vaapostora vaJesu zvechokwadi vakanga vachidya nyama yake chaiyo uye vachinwa ropa rake here? Kwete, nokuti izvozvo zvingadai zvakava kudya nyama yomunhu uye kutyorwa kwomutemo waMwari. (Genesisi 9:3, 4; Revhitiko 17:10) Maererano naRuka 22:20, Jesu akati: “Kapu iyi inomirira sungano itsva muropa rangu, ramuchadururirwa.” Kapu iyoyo yakava chaizvoizvo “sungano itsva” here? Izvozvo zvaisaita, sezvo sungano chiri chibvumirano, kwete chinhu chinobatika.
Saka, zvose zviri zviviri, chingwa newaini zvinhu zvokungofananidzira chete. Chingwa chinofananidzira muviri waKristu wakakwana. Jesu akashandisa chingwa chakasara pakudya Paseka. Chingwa chacho chaigadzirwa chisina mbiriso. (Eksodho 12:8) Bhaibheri rinoshandisa mbiriso sechiratidzo chechivi kana kuti uori. Saka chingwa chinomirira muviri wakakwana wakabayirwa naJesu. Iwo wakanga usina chivi.—Mateu 16:11, 12; 1 VaKorinde 5:6, 7; 1 Petro 2:22; 1 Johani 2:1, 2.
Waini tsvuku inomirira ropa raJesu. Ropa iroro rinoita kuti sungano itsva ishande. Jesu akati ropa rake rakadururwa “nokuda kwokukanganwirwa zvivi.” Saka vanhu vanogona kuva vakachena kuna Mwari uye vanogona kupinda musungano itsva naJehovha. (VaHebheru 9:14; 10:16, 17) Sungano iyi, kana kuti chibvumirano, inoita kuti vaKristu vakatendeka 144 000 vakwanise kuenda kudenga. Ikoko vachanoshumira vari madzimambo nevapristi kuti vamwe vanhu vose vakomborerwe.—Genesisi 22:18; Jeremiya 31:31-33; 1 Petro 2:9; Zvakazarurwa 5:9, 10; 14:1-3.
Ndivanaani vanofanira kudya izvi zviratidzo zveChirangaridzo? Zvinonzwisisika kuti vaya chete vari musungano itsva—kureva vaya vane tariro yokuenda kudenga—ndivo vanofanira kudya chingwa uye kunwa waini. Mudzimu mutsvene waMwari unoita kuti vakadaro vave nechokwadi chokuti vakasarudzwa kuti vave madzimambo okudenga. (VaRoma 8:16) Ivowo vari musungano yoUmambo naJesu.—Ruka 22:29.
Zvakadini nevaya vane tariro yokurarama nokusingaperi muParadhiso pasi pano? Vanoteerera murayiro waJesu uye vanopinda Kudya kwaShe Kwemanheru, asi vanenge vachingova vacherechedzi vanoremekedza, kwete vaya vanodya. Kamwe chete pagore pashure pokunyura kwezuva pana Nisani 14, Zvapupu zvaJehovha zvinochengeta Kudya kwaShe Kwemanheru. Kunyange zvazvo zviuru zvishomanana chete munyika yose zvichiti zvine tariro yokumatenga, chiitiko ichi chinokosha kuvaKristu vose. Inguva apo vanhu vose vanogona kufungisisa rudo rwakanaka kwazvo rwaJehovha Mwari naJesu Kristu.—Johani 3:16.
Tinokukoka kuti uvepowo patichayeuka rufu rwaJesu tichitevedzera zvaakataura. Pamusangano wacho uchadzidza kuti zvakaitwa naJesu uye kufa kwaakaita zvingakubatsira sei.
Ndicho chiitiko chinonyanya kukosha kuZvapupu zvaJehovha, chinonziwo Chirangaridzo. Inzwa kuti Bhaibheri rinoti kudii nezvechiitiko ichi.